अर्थमन्त्रीको प्रश्नः शेयर मूल्य किन घटेको छ ? उत्तरः लगानी गर्नुहोस बढ्छ – Banking Khabar
बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले “बैंकहरुले नाफा कमाएका छन्, उद्योग कल–कारखानाको क्षमता बढेको छ, उत्पादन बढेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ तर त्यही कम्पनीको शेयर मूल्य किन घटेको छ ?” भन्दै पत्रकारहरु समक्ष प्रश्न गरेका छन् । उनले पैसा हुनेले शेयर नकिन्दा समस्या आएको समेत बताएका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको अद्र्धवार्षिक सयमिक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरुसंगको कुराकानीमा मन्त्री खतिवडाले पैसा हुनेले शेयर नकिन्ने र अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीलाई आरोप लगाउने गरेको बताएका हुन् ।
खतिवडाले मुस्कुराउँदै भने तपाई “तपाई पत्रकार साथिहरुपनि शेयर किन्नुस् बजार बढ्ला! अर्थमन्त्रीसंग पैसा छैन कसरी शेयर किन्ने ?” तर अर्थमन्त्री खतिवडाले यो भनेन् । बजारमा लगानी योग्य पैसाको अभाव छ त्यसैले शेयर परिसूचक नेप्से बढ्न सकेको छैनन् । उनले यो पनि भनेनन्, बजारमा देखिएको तरलता अभाव न्यूनिकरण गर्न सरकारले समयमै खर्च गर्ने छ । उनले अझै भन्न चाहेनन् दुईतिहाई बहुमतको बलियो सरकारले अर्थतन्त्रमा सकरात्मक काम गर्न नसक्दा लगानीकर्ताले पत्याएनन् । त्यसैले शेयर बजारमा लगानी बढन सकेन ।
अर्थमन्त्री खतिवडालाई थाहा भएर पनि नभनेको कुरा के हो भने अहिले कुनैपनि क्षेत्रमा गरिने लगानीबाट हुने प्रतिफल भन्दा बैंक ब्याजदर उच्च छ । त्यसैले बैंक निक्षेप मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार भन्दा बढी देखिएको छ । उनले यो पनि भनेनन् अर्थतन्त्रको आकार भन्दा बैंक निक्षेप बढी हुनु राम्रो हो या नराम्रो हो । उनले अझै भन्न चाहेनन नेपालको कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा कृषि उत्पादनले दिने योगदान बराबर रेमिट्यान्स आप्रवाह छ त्यसैले अर्थतन्त्र उल्टो दिशामा हिनिरहेको छ । उनले भन्नुपर्ने थियो उल्टो दिशामा हिनेको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा कसरी लगानीकर्ताले शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्छन् । तर भनेनन् ।
समिक्षा पछि पत्रकारले पनि सोध्न बाँकी राखेनन् । तपाई विज्ञ हुनुहुन्छ तर अर्थतन्त्र किन सस्तो भएको? सरकारले किन खर्च गर्न नसकेको ? तपाई असफल भएको हो ? उनले फेरी भने सफल र असफलको कुरा होइन नयाँ मोडमा अर्थतन्त्र छ । खर्चका दायराहरु बढेका छन्, केन्द्रिय सरकारले मात्र खर्च गर्दैन, तीन तहको सरकारले गर्ने खर्चको आकार ठुलो छ । त्यसमा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन् । तर उनले यो भनेनन् बजेटको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा र पुरानै कार्यशैलिका कारण बजेट खर्च बढन सकेन् । यसलाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।
मन्त्री खतिवडाले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिएपछि मूल्य वृद्धि, ब्याजदर र विदेशी विनिमयदर सरकारले तोक्न नसक्ने बताउँदै अर्थतन्त्रका यी तन वटै क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको तर मूल्य वृद्धि र ब्याजदरलाई सही बाटोमा लैजान पर्ने अवस्था आएको स्पस्ट पार्ने प्रयास पनि गरे । उनले बैंक ब्याजदरलाई निस्चित सिमाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले त्यस्तै काम गर्दा आलोचना भएको तर ब्याजदर न्यून हुँदाको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सहजरुपमा चल्ने र बैंकको मुनाफा पनि सामान्य अवस्थामा रहने भएकाले बजारले धान्न सक्ने गरी ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने बताए । उनले ब्याजदर माथि जाँदा अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप ग-यो भन्ने हरुले ब्याजदर असाधारण रुपमा तलझर्दा चिन्ता नलिने बताउँदै स्प्रेडदर चार वर्षमा झार्ने संकेत गरेका छन् । उनले ब्याजदर तलझर्दा समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले ब्यालेन्समा राखेर जानुपर्ने तर्क गरेका छन् । बजारमा ६ प्रतिशतमा कर्जा पाउने अवस्था आयो र मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत भयो भने यो वर्ष एक सय रुपैयाँ बचत गर्नेको पैसा अर्कोवर्ष १ सय २ रुपैयाँ हुन्छ । किन भने ५ प्रतिशत कर्जा हुँदाको अवस्थामा ४ प्रतिशत स्प्रेड हुँदा २ प्रतिशत निक्षेपको ब्याज हुन्छ । यूतो अवस्थामा क्रयशक्ति घटेर ९७ रुपैयाँमा आउने छ । मन्त्री खतिवडाका अनुसार त्यो बेला पनि बचत गर्ने वातावरण भएन भनेर गाली खानुपर्ने पनि अर्थमन्त्रीले नै ओ । त्यसैले यस्तो अस्वाभाविक कुराहरु अर्थतन्त्रमा हुन दिनु भएन ।